Inona no vaovao avy amin'ny Google: Pixelbook, Pixel 2 ary maro hafa | Vaovao momba ny gadget
Ny orinasa Aza Be Ratsy dia mihabe toa an'i Apple. Ao anatin'ny fiezahana tsy tapaka hamokatra fitaovana maoderina misimisy kokoa amin'ny volavolaintsika manokana, androany dia mahita filokana mahaliana any amin'ny sampana rehetra eo amin'ny tsenan'ny elektronika mpanjifa isika.
Toy izao no nanoloran'i Google ny Pixelbook, Pixel 2 ary fitaovana hafa miaraka amin'ny fikasana hanao ampihimamba ny tsena farany ambony azo atao ary mamorona base tsy miovaova amin'ireo mpampiasa izay tsy matoky an'i Google fotsiny amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Andao hianatra bebe kokoa momba ny zavatra atolotry ny Google antsika. ,
2 Google Pixel 2 handresy ny tsena
3 Home Mini no mpanampy anao
Manomboka amin'ny solosaina finday na izay azo ovaina natolotr'i Google. Raha ny marina, isika dia miatrika fivadihana avo lenta izay te hiala kely amin'izay azon'ny PC kilasika atolotra antsika. Be loatra ka mahita ny tenantsika isika alohan'ny efijery iray 12,9 santimetatra miaraka amin'ny fahafaha-mihodina 360º, mazava ho azy fa alohan'ny an'ity endri-javatra ity dia hahita takelaka fikitika isika. Raha fintinina dia hisafidy isika raha mila PC na takelaka iray. Ho an'ity dia hiaraka amina stilosy izay mbola hita ny fampisehoana azy, nefa azo antoka fa handrefy.
Ny Samsung convertible dia misy toetra mihoatra ny mahaliana ihany koa, hisafidy isika eo amin'ny processeur Intel i5 na i7, angamba angovo be loatra sy fanjifàna ho an'ny solosaina takelaka, na dia heverinay fa hanana eritreritra tsara aza izy ireo. Ilaina farafaharatsiny mba hamindra ny vahaolana QuadHD izay manolotra ny tontonana.
Ny fahafahan'ny memozy RAM dia mitambatra ao amin'ny 16 GB raha ao amin'ny fitehirizana kosa dia hifindra eo anelanelan'ny kapila 128 sy 512 GB an'ny SSD isika arakaraka ny filantsika sy ny tanjaky ny toekarena. Raha eo amin'ny lafiny fitaovana dia alefa ny aliminioma sy ny firosoana amin'ny minimalism. Ny solosaina finday dia hanomboka amin'ny € 1.199 any Espana, tsy misy daty nanombohana, izay tokony ampiana tsy latsaky ny 90 € ho an'ny pensilihazo maranitra. Mikasika ny fizakan-tena dia mampanantena ny hampiasana 10 ora i Google, ary ny seranan-tsambo USB-C roa sy ny rafitra miasa mifototra amin'ny Chrome OS.
Google Pixel 2 handresy ny tsena
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, Google dia manatevin-daharana ny fironana amin'ny efijery FullVision amin'ny fahatsiarovana tsy misy diso ny anoloana ananantsika ao amin'ny LG G6. Raha ny marina dia mety hieritreritra isika fa ny orinasa Koreana Tatsimo dia nifandray tamin'ny famokarana. Amin'ny endriny mahazatra dia hiaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 835 sy RAM 4 GB, miaraka amin'ny famaritana mitovy amin'ny kinova Pixel XL 2.
Tsy mitovy ny endrik'izy ireo amin'ny efijery, manolotra efijery ny dikanteny mahazatra OLED miaraka amin'ny famaha FullHD raha ny kinova XL dia miakatra amin'ny tontonana QHD. Ny fahasamihafana eo amin'ny habeny dia 5 ka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny 6 santimetatra ho an'ny lehibe indrindra. Samy misy roa fakan-tsary aoriana miaraka amin'ny rafitra OIS iza no nahazo isa ny 98 ao amin'ny DxOMark, ny tsara indrindra eny an-tsena hatreto. Ny bateria koa dia singa iray miavaka, eo anelanelan'ny 2.700 mAh sy 3.500 mAh ary samy dihy avokoa ireo singa roa. Miaraka amin'ny. Bluetooth 5.0, mpamaky rantsantanana, fanoherana rano, fifandraisana USB-C, eSIM ary mpandahateny stereo.
Ny vidiny mbola tsy voamarina, hahatratra 1.000 € amin'ireo mpifaninana aminy tsy misy isalasalana, nomanina mandritra ny volana vitsivitsy.
Home Mini no mpanampy anao
Inona no vaovao avy amin'ny Google: Pixelbook, Pixel 2 ary maro hafaary miaraka amina mpandahateny kalitao afaka manome feo 360 °. Mbola jerena ihany ny fomba fiasa amin'ny tontolo tena izy, fa amin'izany vidiny izany dia tsy hay tohaina miaraka amin'ireo loko telo, mainty, fotsy sy mena. Tsy isalasalana fa mpandahateny kely iray izay etsy an-danin'izany dia hanana be dia be ny manaporofo raha te hampiseho mazava fa mety ho lasa mpisolo toerana an'izay atolotry Samsung sy Apple antsika miaraka amin'ny vokariny mitovy amin'ny halalin'izy ireo. Ny mazava dia izao fa amin'ny € 50 dia ho lasa safidy tsara kokoa ho an'ny maro amin'izy ireo izy io, ho hita ny ambiny ary holazainay aminao izany. Tsy adinonay ny Pixel Earbuds, headset tsy misy tariby misy fandikan-teny eo no ho eo sy Google Assistant.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Events » Inona no vaovao avy amin'ny Google: Pixelbook, Pixel 2 ary maro hafa
Manolotra famantaranandro vaovao roa ny SPC amin'ny vidiny mihena, Smartee Pop sy Sport
Western Digital dia mivarotra kapila mangirana misy tahiry 14 TB